Yaadoo Hamaa Fayyaa Aleeksii Navalii Laalchisee
Kan hidhaa keessa jiru hogganaan mormitoota Raashiyaa Aleeksii Navalii haallii fayyaa isaa gad adeemaa buluun kan akkaan ishee yaaddeesse ta’u Yunaaytid Isteetes beeksiiftee jirti.Navalaany dhukkubbii duugda isaa Milla isaa irraa itti dhaga’amuuf angawoonni mana hidhaa wal’ansa fayyaa isa barbaachiisu akka kennisisan gochuuf guyyoota 24 nyaata lagatee kan ture amma dhaabee jira.Qufaa hamaa fi ho’a qaamaa qabaachuu isaa ibsaa kan ture Navalaany namoonni isa waliin hidhaman dhukkuba sombaan qabamanii hospitaala seenanii jiru.
Haallii fayyaa Navalii gad adeemaa jiraachuun prezidaantii Yunaaytid Isteetes Joo Baaydin yaaddeessuu isaa itti gaafatamtuun preesii kan masaraa Waayit Haawus Jeen Saakii ibsanii jiru.
Dubbii himaan ministrii dantaa alaa Yunaaytid Isteetes Teed Praayis yaaddoo kana qabaachuu isaanii ibsanii Angawoonni biyyatti fayyaa fi nageenya Naavalaany mirkaneesuuf tarkaanfii barbaachiisu akka fudhataniif gaafatan.Kana malees akka battalumatti hiikamuu akkasumas deggertoota isaa irra dararaan ga’u akka xumuura argatu irra deebinee gaafanna jedhan.
Raashiyaan meeshaa keemiikaalaa gargaaramuun Navalii summiin miidhu isahee kan ilaaleen Bitooteessa 2 ministriin dantaa alaa ugguura Raashaa irra ka’ee ture babal’isee jira.Uggurri kun diraan kan Raashaa irra ka’ameef sababaan bara 2018 Yuunaayitid Kingdam keessatti warri basaasa Raashaa nama Sargee Skriipal jedhamu keemikaalaan summeessanii booda ture.
Dabalataan immoo ministriin Maallaqaa fi ministriin hajaa alaa Amerikaa namoota Raashaa hedduu fi dhaabbatoota sagantaa meeshaa Keemiikaalaa, ministeera Ittisaa fi kutaa basaasaa kan Federeeshinii Raashiyaa waliin hidhata qaban irra ugguura ka’an.
Meeshaaleee waraanaa fi tajaajiila waraanaa biyya ofiin ala akka hin baafnee jechuun biyyota imaammata ba’e isaan tarreesse keessatti Raashaan dabalamtee jirti.
Raashiyaan meeshaa kemiikaalaa gargaaramuu fi dhiittaa mirga namoomaa geesisuun ishee, waan hamaa kan hordoofsisuu ta’u aangawoonni Amerikaa kallattiin akka ibsaniif mootummaan Yunaaytid Isteetes aangawoota isaaf ibsee jira. Meeshaa Keemikaalaa gargaaramuun kan fudhatama hin qabnee fi seera addunyaa kan cabsuu ta’u ministriin dantaa alaa Yunaaytiid Isteetes Antonii Bliinken. Gara fuula duraatti yoo Raashiyaan kana itti fuuftii ta’e maaltu ta’u akka danda’u dursee dubbachuu hin fedhu jechuun akeekkachiisan dubbi himaan ministrii dantaa alaa Amerikaa Teed Praayis.
Raashaan gara jabinaan haallii itti Navalaanyiin qabdee jirtuuf itti gaafatamtuu akka taatuu shakkuu hin qabdu jechuun gulaalaan har’a yaada isaa xumuree jira.